सदा फुर्तिलो रहन र आफ्नो कलेजो सफा पार्न खाने गर्नुहोस यी ५ खानेकुरा - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»सदा फुर्तिलो रहन र आफ्नो कलेजो सफा पार्न खाने गर्नुहोस यी ५ खानेकुरा
सदा फुर्तिलो रहन र आफ्नो कलेजो सफा पार्न खाने गर्नुहोस यी ५ खानेकुरा
By मनिषा थापा on ८ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १०:३५ स्वास्थ्य/जीवनशैली
एजेन्सी : स्वस्थ जीवन बाँच्ने ईच्छा सबैको हुन्छ । स्वस्थ जीवन बाच्नका लागि मानिसको कलेजो स्वस्थ रहुन अति आवश्यक छ । र कलेजो सफा राख्न तापाईले आफ्नो आहारमा माथी उल्लेखित पाँच खानेकुरालाई बिर्सनु हुंदैन । तसर्थ यी पाँच आहारको प्रयोग गर्नुहोस् र आफ्नो कलेजो लगायत शारिरीक तन्दरुस्ति पाउनु होस् ।
मानव शरिरमा भएको कलेजोले प्रत्येक एक मिनटमा १.५ लिटर रगत प्राप्त गर्छ र उक्त रगतलाई शरिमा संचार गर्ने गर्छ । जसको सहायताले मानीस जिवित रहन्छ ।
शरिरमा रहेको रगत सफा पार्ने काममा कलेजोको प्रमुख दायित्व रहन्छ । कलेजोले नै रगतमा भएका हानिकारक पदार्थहरु जस्तै रक्सी वा लागुपदार्थ वा विषाक्त हानिकारक तत्वहरुलाई चाल्नोले चाले जस्तै चाल्ने काम गर्छ ।
कलेजोले भिटामीन, आइरन, ग्लुकोजलाई बचाउने तथा संचय गर्ने काम गर्छ । यसले जम्मा भइरहेको चिनीलाई आवश्यकतामा परिणत गरिदिन्छ र ग्लुकोजको मात्रालाई आफू अनुकुल बनाउँछ । यसले हेमोग्लोविन, इन्सुलिन र हर्मनलाई घोलिदिन्छ र मेटाबोलिज्ममा तेजी ल्याउनुका साथै पुरानो रगतका सेलहरुलाई मार्ने कार्य गर्छ । तर कलेजोलाई बलियो बनाइ राख्न हामीले प्रयोग गर्ने आहारमा भर पर्छ । र माथी उल्लेखित आहारहरुले कलेजोलाई तन्दरुस्त राख्ने काम गर्छ ।
लसुनले कलेजोमा जम्मा हुन आउँने विषाक्तलाई एक छिनमै सफा पारिदिन्छ । लसुनमा एक प्रकारको सक्रियहुने क्षमता हुन्छ जसले कलेजोमा भएको इन्जाइमलाई सक्रिय पार्ने काम गर्छ र विषाक्तलाई तुरन्तै बाहिर पठाइ दिन्छ ।
कागतीमा भीटामिन सी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । कागतीले शरिरमा भएका विषाक्तबाट छुट्कारा दिलाउँछ । कागतीले कलेजोमा जम्मा हुन आउने कोलस्ट्रोललाई घटाउने काम गर्छ । तसर्थ बिहान एक गिलास पानीमा आधा कागतीको रस घोलेर सेवन गर्नुहोस् । कागतीको प्रयोगले विषाक्तलाई काट्ने काम गर्छ ।
३. ब्रो-काउली र काउली
ब्रोकाउली र काउली खानाले शरिरमा ग्लुकोसिनोलेटको मात्रा बढ्छ । र यी दुई सब्जीले कलेजोमा भएको विषाक्तलाई बाहिर फाल्ने काम गर्छ ।
विषाक्तलाई काट्ने काममा बेसारको प्रयोगले ठूलो भूमिका खेल्छ । घरेलु प्रयोजन (जस्तै औषधी, रङ, मसला र धार्मिक कार्यक्रमहरुमा) को रुपमा बेसारको प्रयोग चार हजार वर्ष पहिले देखी हुँदै आएको छ । यसमा तनाव तथा घवराहट काट्ने शक्ति हुन्छ र यसले कलेजोमा जम्मा हुन आउने विषाक्तलाई काट्नुका साथै अरु धेरै प्रकारको फाइदाहरु दिन्छ ।
५. हरियो सागसब्जी
हरियो सागसब्जीलाई भान्साको राजा नै मान्ने गरिन्छ । हरियो सागसब्जीमा इन्जाइम, भिटामीन र पोष्क तत्वको मात्रा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ र यसकोे सेवनले संपूर्ण शरिर स्वस्थ रहन मद्धत पुग्छ । यसले शरिर तथा कलेजोमा जम्मा हुन आउने अनावश्यक बोसोलाई पनि पगाल्ने काम गर्छ ।